Ịgba Chaa Chaa China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ịgba Chaa Chaa - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ịgba Chaa Chaa)
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe omimi nke kpo oku na-emetụta ihe niile gbasara ndụ anyị kwa ụbọchị. Dị ka mirror defog usoro, nlekọta ahụike maka boby, ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, ihe ọkụkụ na-ere ọkụ, ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ, mgbidi na-ekpo ọkụ, ọkụ eletrik, teepu tileti kpo oku, wdg. Ya mere, olee ihe nkiri uhie...
Nkọwapụta ngwaahịa Anyị nwere ike kwa ụbọchị nke na anyị mkpịsị aka freezed ikwesi na oyi, na-eme na ala-arụ ọrụ arụmọrụ. Anyị Electric Desktop Ọkụ Heating ute nwere ike nyere gị ihe ngwọta maka nsogbu a. Ihe ntanetị ọkụ eletrik anyị, nke mejupụtara ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ nke kpụ ọkụ n'ọnụ, na-enye gị...
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe ntanye desktọọpụ desktọọpụ desktọọpụ maka ụlọ ọrụ na ebe obibi ọkụ na-eji eme ihe eji eme ihe. Ọ gụnyere ihe nkiri kpo oku infrared dị ukwuu, nkà na ụzụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọkụ. Kedu ihe nkiri kpo oku nke dị ọkụ? Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-eme ka ọ dị ọhụrụ bụ ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche na ụlọ...
Nkọwapụta ngwaahịa Malite ụzọ ndụ gị nke kpo oku na otu nzọụkwụ ! Igwe ihe nkiri ikpo ọkụ infrared: Mkpụrụ akwụkwọ carbon crystal, nke nwere ụzarị ọkụ ọkụ na-acha ọkụ. Site na nka na uzu ohuru nke oma na-acho uzo di iche iche (PTC), o bu nduzi onwe ya, o di mma ma zoputa ya. Mmiri mmiri, na-agbanwe agbanwe ma...
Nkọwapụta ngwaahịa Ọkụ ọkụ eletrik anyị na - enye aka ruo awa isii ọkụ na usoro mgbasa (43 ℃) na ruo awa 3 na elu okpomọkụ ọnọdụ (50 ℃) .Ọkụcha ihe ọkụkụ, aka ọkụ na - anụ na 15seconds.Ọ na - ndụ ọrụ. Edobela aka anyị iji zoo EC, ROHS, akwụkwọ. OEM oru ngo di. Ohu nke gi. Ngwa Ngwaahịa Nwere ike iji dị ka oyi oyi...
Nkịtị na-ekpo ọkụ maka Desktọpụ na OA Nkọwapụta ngwaahịa A nkịtị oche na mpe mpe akwa ma ọ bụ ute bụ a table n'echebe-eji mgbe na-arụ ọrụ ma ga-eme ka mmebi desk.But anyị pụrụ iche oche na mpe mpe akwa nwere otu ọzọ ọrụ-heating.Our oche kpo oku na mpe mpe akwa a na-gụnyere anya infrared kpo oku film, a ọhụrụ ụdị...
Egwuregwu Egwuregwu Electrtop Na-ekpocha Ngwá Ọrụ Nhazi
Egwuregwu Egwuregwu Electrtop Na-ekpocha Ngwá Ọrụ Nhazi Nkọwapụta ngwaahịa Na-ekpo ọkụ na okomoko gị na desktọọpụ na-eji ọkụ na-emepụta ihe ugbu a. Site na ntinye dị mfe, ndị a na-ekpo ọkụ na desktọọpụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịhụ ụlọ ọ bụla n'ime ụlọ gị n'anya. Onye ọ bụla na-ekpo ọkụ ọkụ nwere njikwa na ike...
Ịgba Chaa Chaa Ịgba chaa chaa Ptc Ịgba chaa chaa AC220V Ịgba chaa chaa Ịgba chaa chaa nke ọma Ụmụaka Ịgba chaa chaa Ịgba chaa chaa USB ọkụ Ịgba chaa chaa na-ekpo ọkụ